မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVIII	1
စတဲ့ ဖေ့ဗုက်ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုရှေ့ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြရှင်းလင်း ချေပပြီးပါပြီ၊
ခုဆွေးနွေးမှာကတော့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရေကာတာ ၇ လုံးမှပေါ်ထွက်လာမဲ့
သို့ပင်ငြားလည်း၊ဆရာဦးထွန်းလွင်ကစီပီအိုင်ကဘဲချမပြခဲ့သလို၊ CPI စီပီအိုင်ကဘဲ စစ်အစိုးရ
ဆရာကြီးက ကုလားမနိုင်ရခိုင်မဲ (မေး) ပြန်ပြီလို့ပြောရမလား၊တံခါးမှားခေါက်ပြန်ပြီလို့ပြောရ
မလား၊ ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့လိုက်အောင် တပ်အပ်သေချာမှပြောဘို့ကောင်းတယ်မဟုတ်
စဉ်းစားကြည့်လေ၊ကလေးတောင်နားလည်တယ်၊ အလုပ်အပ်သူ အလုပ်ရှင် စစ်အစိုးရ ရဲ့ဆန္ဒလား?
အလုပ်ရသူရဲ့ဆန္ဒလား? အလုပ်သမားကအလုပ်ရှင်ကိုပြန်ခိုင်းနေကျလား? လျှို့ဝှက်လုပ်နေကြ၊
လုပ်ဘို့အကြောင်းရှိသူကဘယ်သူလဲ? မတရားနည်းနဲ့အာဏာယူထားသူစစ်အစိုးရပါ ဆရာကြီး?
ဟိုလူ့မယုံ ဒီလူ့မယုံ သူ့လက်ထဲကအာဏာ လုသွားမှာစိုးလို့၊ပြည်သူတွေပုန်ကန်မှာကြောက်
လို့အသေးအဖွယ်က စ တားမြစ်နေကျပါ၊
နောက်ပြီး စစ်အစိုးရကလာလုပ်ဘို့သွားသွား ပြီး ပင့်ဘိတ်တာဖြစ်လို့လဲ၊မျက်နှာပန်းရသူ CPI စီပီအိုင် က သူများကို
ခိုးချောင်ခိုးဝှက် လုပ်ဘို့အကြံပေးနေဘို့မလိုပါ၊CPI စီပီအိုင်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရှင်းလင်းပြီးပါပြီ
ဒေါ်စုထံစာချုပ်ကိုတင်ပြပြီးပါပြီ၊ စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှတောင်းယူရရှိလာ တဲ့ စာချုပ်ကို ကော်မရှင်ကပြည်သူ
အား အပြည့်အစုံချပြရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်၊လောလောဆယ် စာရှုသူတွေက အသေးစိတ်ကို မသိလိုက်လို့Facebook ဖေ့ဗုက်မှာ အောက်ပါမှတ်ချက် တွေကို
========== ဆောက်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ဟုပ်ပါပီ တရုတ်အတွက်လား ဘယ်လိုခံစားခွင့်ပျက်စီးခဲ့ရင်တာဝန်ယူမဲ့ကဏ္ဍတွေ
စာချုပ်စာတန်းတွေကိုတော့ပြည်သူတွေကိုချပြသင့်ပါတယ် ။ ။ မြစ်စုံ က စာချုပ် ဘယ်လိုချုပ်ဆိုတယ် ဘယ်အတိုင်းအတာ ဘယ်လိုစည်းကမ်းချက်တွေ ဘယ်လိုခွဲဝေထားတယ် နှစ်နိုင်ငံအကျိုးက ဘယ်ဘက်ကရာခိုင်နှုန်း% သည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပတ်သက် ခင်း အဆင့်
နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စာချုပ်မှု ခဗျား မြင်ဖူးလားမြန်မာပြည်သူက ၁၀ရာခိုင် နှုန်းသာရမယ့်အခွင့်အရေးမျိုးနဲ့တော့မြစ်ဆုံကိုရောင်းစားဖို့
ကျွန်တော် လူပါဗျာ သူများနိုင်ငံအတွက်က ၈၀ ရာခိုသ်နုံး ကို့အတွက်က ၂၀ ပါလျှပ်စစ် ၅၀ ရာနုန်းရမယ်ဆည်အောက်မြို့တွေအတွက်လုံခြုံရေအာမခံချက်ရမည်ဆိုလက်ခံသင့်
ဘာတွေရခဲ့လဲ တနှစ်ကိုဘယ်လောက်ရမလဲ ဆည်တည်ပြီးရင် ၊၊၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းခံစားခွင့်ဟာတရုတ်က ၉၀%မြန်မာက ၁၀% ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လဲကိုယ်နိုင်ငံအတွက်မပါဘူး အကြိုးစီးပွားရဲ့၇၅ရာခိုင်နှုံးကျော်ပြည်သူတွေခံစားရမယ်ဆိုင်ရင်လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့ပြီး ထာက်ခံလိုက်ပါ့မယ်။အခုတိုင်းကတော့မြန်မာကလျပ်စစ်၉၀ရာနှုန်းရမှာလား
ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်တယ်ထား အုံး။အခုဆိုမိုီးတွေအသည်းအသန်ရွာနေတာသတိထားကြအုံး။ပြီးတော့၉၀း၁၀နော်။50% 50 % လုပ် ရင်ကော်???
နှစ်ငါးဆယ်မှာ ၉၀ ရာနှုန်းကလုပ်တဲ့လူတွေကရမှာ..အလကားရတဲ့ ၁၀ ရာနှုန်းကမြန်မာပြည်နှစ်ပေါင်းရာချီနောက်ကျန်နေမယ် မြစ်စုံဆည်ဆောက်ပြီးလိုအကျိုးရှိမှာကသူတို
လာအို နော်ဝေ နိုင်ငံတွေကလဲ မြန်မာနိုင်ငံလို ၁၀% ပဲရလို့ကြီးပွားတိုးတက်နေပါသလား မြန်မာနိုင်ငံသူ သားအကျိုးခံစားခွင့် ၁၀%ရရှိလို့ကြားမိလို့ပါ
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းက ကြားတောကြာဖူးပါတယ် ဆုံးရှံးမှူ့ များမယ်ထင်တယ် တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ ဆုံးရှုံးသူတိုင်းကို အဲထက်ပိုတဲ့ ရော်ကြေးပေးမယ် ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ မြစ်ကတော့ ပျစ် (ပျက်)မသွားလောက်ဖူးထင်တယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အထက်ကစီးဝင်သလောက်တော့ ထုပ်(ထွက်) နေရမှာပဲ လှောင်ထားရင် ဘယ်ရမလည်း
မြန်မာက 10%နှုန်သာခံစားခွင့်ဘဲရတာ ဘာအကျိုးမှမရှိပါ တီးတိုးဝါဒဖြန့်မှ (မှာ)ကလက်ဦးမှုရသွားတယ်မြစ်ဆုံဆည်ကျိုးရင်တနိုင်ငံလုံးဆူနာမီလိုရေမြုပ်မယ်တို့၊ဆည်တွေကိုစစ်အစိုးရကသူတို့မအုပ်ချုပ်ရရင်တနိုင်ငံလုံးရေမြှုပ်ဖို့အကွက်ချတည်ထားတာတို့နဲ့ကောလဟလပေါင်ချုပ်ပြုစုရင်စာမျက်နှာအတော်ထူတဲစာအုပ်တစ်အုပ်ရနိုင်တယ်
ဆောင်းပါး ၂၂၆၈၅၅ # ၁၈ မှာ အကျဉ်းရုံး ပြီ ဖြေထားတယ် ရေကာတာ ဆက်လုပ်ခြင်းဖြင့် $ သန်း ၁၀၀၀ အလျှော်သက်သာမယ်၊ နှစ်စဉ် $ သန်း ၅၀၀ လဲ ရမယ်၊
(၁၀%) ၆၀၀ မီဂ္ဂာဝပ် ဓာတ်အား အခမဲ့ရမယ်၊ ကျန် ၉၀ % ၅၄၀၀ မီဂ္ဂာဝပ် ကိုရောင်း ပြီး၊အခွန်လဲကောက် အမြတ်လဲ ထပ်ခွဲ၊ နောက်လဲ ရေကာတာ
လုပ်ပြီးTourists ဆီကဝင်ငွေ $ သန်းချီရအုန်းမယ်၊
အခြားရေကာတာတော်တော်များများတို့ထက် မြစ်ဆုံရေကာတာ က လျှပ်စစ်စွမ်းအားပိုထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်
လွန်စွာမှကောင်းကျိုးပေးမဲ့ ရေကာတာဖြစ်လို့ဆက်လုပ်ဘို့ထောက်ခံကြပါဆို့ ========= ဆာင်းပါး ၂၂၅၅၁၃ # ၁၁ မှာ တကြိမ် အသေးစိတ် ဖြေခဲ့တယ် (အောက်မှာတိုးချဲ့ပြီးထပ်တင်လိုက်တယ်)
ရာတန်$ ရွက်တွေမှ ၁ ဘီလျံ$ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ $)သုည “၀” ၉ လုံး
က၊ ပဌမ နှစ် ၅၀ မှာ မြန်မာက ၅၄ ဘီလျံ $ ရမယ်၊ မြင်သာအောင် အထက်က ပုံပါကိုသေသေချာချာကြည့်ပါ၊
$ ရာတန်တရွက်ချင်းထုပ်ပြီး၊ အထုပ်တွေကို အတန်းလိုက်စီတာ
၁၀ တန်း (လူတရပ်စာမြင့်)ရလာ၊ဒါ နဲ့ရှေ့က
ဆိုဖာထိုင် မိန်းကလေးရဲ့ တထိုင်စာ ပေါင်းရင် $ တစ် ဘီလျံ ဖြစ်လာ တာပါ၊ ဒါနဲ့မပြီးပါ
$ ၅၄ ဘီလျှံ ဆိုတော့ အဲဒီပုံလို ၅၄ ပုံကိုမြင်ရပါ့မယ်၊ (ပုံရဲ့ ၅၄ ကြိမ် ၅၄ ဆဆိုမနဲပါ)၊
ခ။ ဒုတိယံပိ နှစ်၅၀မှာမြန်မာက ၉၀ ဘီလျံ $ ရမှာ၊
အထက်ကပုံရဲ့ ၉၀ ဆ (ပုံ ၉၀ ပုံ ပါ)
ဂ၊ တတိယံပိ ၂၅ နှစ်ဆိုရင် ၄၅ ဘီလျံ $ ရမယ်။
(ဒါကြောင့် ဒုတိယံပိ ၅၀ နှစ်မှာ တရုပ် ရမဲ့ ၃၆ ဘီ လျံ $ ကို
မြန်မာအစိုးရကဘဲ အပို ရလိမ့်မယ် (မူလ ၅၄+ နောက်တိုး ၃၆)
တတိယ ၂၅ နှစ် ကြတော့ ရှေ့က ၉၀ ရဲ့ တဝက်ပါ)
တရီး လျံ ကဘီလျံ တထောင် $ (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀$) သုည “၀” ၁၂လုံးTrillion $
မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၁၀၀၀ ကျပ် ကျော် နဲ့မြှောက် ပြီး အထက်ပါ တရီလျံ ဖြစ်လာမှာ၊
“$” အစား “ကျပ်” Trillion တရီးလျံ ပုံကို ကျပ်နဲ့ဘဲ “ဟန်ဆော”င် ကြည့်ပေါ့။ အထက်ပါ”ဟန်ဆောင်တရီး လျံ ကျပ်” တို့ရဲ့ ၅၄ ပုံ ၅၄ ဆ ရှိပါတယ်၊၊
($ ဈေးက ၁၃၄၀ ကျပ်ထိ တက်သွားပြီနော်)၊
နှစ် တရာ မှာ စုစုပေါင်း $ ၁၄၄ ဘီလျှံ
နှစ် ၁၂၅ မှာ စုစုပေါင်း $ ၁၈၉ ဘီလျှံ
စီပီအိုင် ရဲ့ ၂၀၁၅ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ကရှင်းလင်းပွဲမှကောက်နှုတ်ချက်များ
အစိုးရဝန်ထမ်းလစာပေးဘို့မလုံလောက်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ $ သန်း ၁၀၀ ကိုချေးမယ်လို့
ပြောပါတယ် (အောက်ပါ ဩဂုတ်လ ၉ ရက်ဧရာဝတီသတင်း)၊
ဒီလိုနဲ့နှစ်စဉ် လစာပေးဘို့ မလုံလောက်လို့ဒီလိုဘဲထပ်တလဲလဲ ချေး ဆိုတဲ့သံသရာကိုဘယ်လိုရှင်းယူရမလဲ စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ
မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း ရေကာတာ ၇ လုံး မှ နှစ်စဉ်ရမဲ့ $ သန်း ၁၀၀၀ (ဘီလျှံ)ဖြစ်ဖြစ်၊ $သန်း ၅၀၀ ဖြစ်ဖြစ်ကိုအလေးပေးပြီးထဲ့စဉ်းစားရမှာပါ၊
အောက်ပါ ” လင့် link” ကိုနှိပ်ပေးပါ။
၊ပြီးတော့ ရေကာတ ပုံ က ၁၀၀၆၀၀ ကျော် “ကြိုက် like” ကိုနှိပ်ပေးပါ၊